Fikarohana momba ny firaisana Mpitarika Guitarista sy Astrophysicist, Brian May, Dokotera toy ny Fiorenan'ny Fitsanganan'ny Physik Mpanorina Isaac Newton - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Mpitarika Guitarista sy Astrophysicist, Brian May, PhD amin'ny maha-rafitra mpanorina ny natiora Isaac Newton
Proposed by: Terry Olesen, PhD
Notohanana tamin'ny: Ny Fanahy Ahtun dia ao amin'ny sehatry ny Fikarohana momba ny Reyncarnation Ryerson-Semkiw
Terry Olesen Manolotra ny tolo-dalàna Absurd izay notontosain'i Isaac Newton tamin'ny niorenany ho mpitondra gitaraista Brian May
Terry Olesen, PhD dia manam-pahaizana momba ny fitsaboana, manam-pahaizana sy mpiara-miasa amiko eo amin'ny sehatry ny fikarohana momba ny vatana vaovao. Taorian'ny nahitana ilay sarimihetsika bohemian Rhapsody, I Terry dia nieritreritra an'izany Queen 'Ny mpihira malaza, Freddie Mercury, dia nanana fiainana taloha tahaka ny mpihira Bengali sy Taget. Mba hijery ity tranga ity, dia alefaso amin'ireto:
Tranom-pitaovam-pandrindrana an'i Rabindranath Tagore | Freddie Mercury
Na dia nanaitra ny fahaizan'i Terry aza aho, rehefa nanolotra izany izy Brian May dia fahatongavana nofo ho mpanorina ny sehatry ny fizika, Isaac Newton, ny fanehoan-kevitra voalohany dia ny fihetsika tsy mahazatra io fihetsika io!
Fiainana taloha momba an'i Isaac Newton sy i Brian May
Tsapako fa mitovitovy ny volom-borona ao Newton sy May ary ny endrika mitovy amin'i Newton sy tanora Brian May dia mahavariana. Kitiho ireo sary mba hampitombo azy ireo.
Ny fikarohana fanao amin'ny vatana dia mampiseho fa ny olona dia afaka manana endriny tena mitovy endrika amin'ny fiainana iray mankany amin'ny iray hafa, na dia mitovy aza ny fitoviana ara-batana dia tsy mametraka toe-javatra iainana taloha. Mba hamerenana hitrandrahana tsy miankina amin'ny fikambanan-jiolahy miaraka amin'ny tarehy toy izany, dia mandehana any:
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao
Ny fiainana taloha talenta
Ny fikarohana fanao amin'ny vatana dia mampiseho koa fa isika, amin'ny maha-fanahy, dia manaraka an-tsakany sy an-taranany mitovy amin'ny fiainana iray hafa. Miezaka ny miverina miozolomana ny mpiangaly mozika, mbola manohy manitatra ny siansa ireo mpahay siansa, ireo mpanao politika dia navela hanohy ny asany ara-politika, sy ny sisa.
Mba hamerenana ny tranga vaovao momba ny fanambadiana indray, anisan'izany ny fanadinadinana tantaram-pahavelomana nandritra ny fotoana niainan'i Ian Stevenson, MD ao amin'ny University of Virginia, izay mampiseho talenta toy izany mandritra ny androm-piainana iray dia azafady:
Fitiavana sy ny fiainana taloha Talenta
Noho io fitsipika io, dia hitako ny fijeriko fa i Isaac Newton dia niorina indray tamin'ny niorenan'i Brian May.
Brian May, PhD, astrophysicist, ary ny fiainany taloha, toa an'i Isaac Newton
Fantatro avy eo fa nanaraka ny asany tamin'ny naha-kintana rock azy i Brian May dia nahazo mari-pahaizana momba ny astrophysique avy amin'ny College of London. Ankoatra izany, Mey dia mpiara-miasa amin'ny ekipa momba ny siansa voakasika tao amin'ny planeta NASA New Horizons Pluto ary nanatrika ny fijerena fiambenana izy, toy ny fiaramanidina tatỳ aoriana nilomano teo amin'ny fehikibo Kuiper, izay tarika misy zavatra kely voangona ho an'ny rano mangatsiaka sy ny gazy mangatsiaka, toy ny metana sy amoniaka.
Afaka miara-manorina ihany koa Day Asteroid mba hampahafantarana ny loza mety hitranga amin'ny asterôida mitranga ho tafavoaka velona amin'ny planet Earth. Ny asterôdy dia nomena anarana tamin'ny May. Izy koa dia niasa toy ny Chancellor of Livermore University John Moores.
Isaac Newton, eny an-dalana, koa dia nafana be momba ny astronomia ary nanamboatra teleskaopy voalanjalanja voalohany.
Ny mahaliana dia nilaza tamin'i Brian May ilay astronoma namina, Royal Martin Rees: “Tsy fantatro ny mpahay siansa iray izay mitovy be amin'i Isaac Newton toa anao.”
Raha ny fahalianan'ny mozika, ny zavatra rehetra hitako dia ny fijerin'i Newton ny fitsipika matematik izay mozika mozika, fa raha ny fahalalako dia tsy nitendry zavamaneno izy.
I Brian May no teraka tamin'ny taonjato maro any Isaac Newton
Amin'ny fivoriana miaraka amin'ny Kevin Ryerson, fampahalalam-baovao mahazatra malaza manerantany izay nantsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao ny fiainam-piainana taloha amin'ny fahamendrehana avo lenta, dia nanamafy i Ahtun Re fa i Brian May dia fahatongavan'i Isaac Newton.
Ny firaisana amin'ny vatana vaovao sy ny olan'ny famehezana
Ny tsy fifankahazoan-javatra iray amin'ity tranga ity dia ny laza malaza indrindra ao Newton amin'ny sehatry ny matematika sy ny fizika, raha oharina amin'ny an'i Brian May.
Izany anefa no fomba fiasan'ny vatana vaovao. Afaka manana fahaiza-manao sy tombontsoa mitovy amin'ny fiainana andavanandro ny olona iray, fa raha misy nofo kosa dia mety hitifitra ny jabora amin'ny resaka laza, nefa mbola tsy fantatra amin'ny fiainana hafa.
Ohatra, George Washington dia nahazo ny sata mitovy amin'ny an'i Etazonia any Etazonia satria heverina ho rain'ny firenena izy. Ny fampodiana amin'izao vanim-potoana izao an'i Washington dia fantatra amin'ny maha-an'i Tommy Franks, izay efa misotro ronono 4 ankehitriny, izay nitarika ady tamin'ny Taliban any Afganistana taorian'ny fanafihana 9 / 11 World Trade Center. Lasa mpitari-tafik'i Central Command Command izy taorian'io.
Raha ny momba ny zava-bitan'ny tafika, i Tommy Franks dia nanondro an'i Washington, fa i Washington kosa no toerana mety, amin'ny fotoana mety, mba hanampiana ny firenena iray, izay nitarika ny tsy fahafatesany. Mba hamerenana ity tranga ity, azafady mankany:
Toy izany koa, velona i Isaac Newton tamin'ny taonjato faha 17 mba hanamafisana ny fototry ny fizik, izay nitarika ho amin'ny toerany sy ny lazany. Izy dia velona indray androany ao amin'ny olona an'i Brian May.
Fiarahabana Reincarnation mifandraika
Firaisana ara-piraisana ara-miaramila
Fahaizana momba ny siansa sy ny teknolojia taloha
Zava-baovao mifangaroharo mozika
Ireo Fitsipiky ny Firaisam-pinoana Nanjavona-Fahatakarana ny fiainana teo aloha
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny tarehin'i Isaac Newton sy i Brian May dia mitovy amin'ny fomba mahavariana.
Ny fiainana taloha talenta: Nanjary natanjaka sy astronoma eran-tany i Bryan May, toa an'i Isaac Newton.
Misaotra sy mankasitraka an'i Terry Olesen aho noho ny fanolorana ity raharaha momba ny fanambadiana vaovao ity.